Ireo zavaboary mahafinaritra an'ny mpivady Kasia sy Jacek Anyszkiewicz | Famoronana an-tserasera
Paulo Victor Graner nitondra antsika tamin'ny volana desambra lasa teo a izao rehetra izao noforonina tamin'ilay nitoeran'ny zavaboariny tao aminy. Biby goavambe maromaro misy ny mampiavaka azy manokana, naseho tamin'ny fomba manokana ho an'ny mpanakanto iray tao anatin'ny 15 taona monja.
Zavaboary izay mitovy amin'ny namboarin'ity mpivady ity, Kasia sy Jacek Anyszkiewicz. Mizara filan-dratsy be izy roa: mamorona saribakoly mahafinaritra avy amin'ny tontolo noforoninao manokana. Mpivady izay mitambatra ao anaty fitambarana hanomezana andian-javaboary sy saribakoly lehibe afaka misarika ny sainao avy hatrany noho ny asany sy ny endriny mahafinaritra.
Manomboka ny dingan'ny famoronana avy any an-dohan'i Kasia. Izy no miandraikitra ny fanaovana sary, sokitra, sary hosodoko ary famaranana ireo zavaboary tsirairay ireo, ka i Jacek, amin'ny maha injeniera simika matihanina azy, dia mitandrina ny lafiny teknika amin'ny famitana ny saribakoly.
Izy ireo no mamorona ireo zavaboary rehetra ireo avy amin'ny rangotra amin'ny tananao manokana amin'ny alàlan'ny fampiasana ireo fitaovana avo lenta indrindra sy ny fijerena manokana ireo pitsopitsony kely indrindra. Ity dia mahavita manintona ny mason'ireo mahita ny famolavolana ireo mpanakanto roa ireo izay mivory amin'ny mpivady miaraka am-pitiavana, ankoatry ny fitiavana lazain'izy ireo.
Karazan-javaboary maro be mandalo sifotra falifaly, ramanavy polar, porcupine zaza, sokatra ala na dragona zazakely. Biby goavambe kely mandalo noho ny an'ny tontolon'i Kasia ao an-dohany mba hamorona ireo zavaboary hafahafa sy mahafatifaty izay afaka mandalo amin'ny maha-protagonista ny iray amin'ireo fampisehoana nataon'i Jim Henson, mpamorona ny The Muppets, Fragel Rock na Sesame Street.
Ianao dia manana ny tranonkalanao avy amin'ny Ity rohy ity, ary ny etsy anao avy ity hafa.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » General » mpanakanto » Ireo zavaboary kely mahatalanjon'i Kasia sy Jacek Anyszkiewicz
Ny marina dia mampino izy ireo! Handinika ny pejinao ao amin'ny Deviant Art aho: =)